နွေရာသီတွင်ဖတ်ရန် neuroeducation နှင့်ပတ်သက်သော5စာအုပ် | ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လေ့လာမှုများ
နွေရာသီမှာဖတ်ရှုဖို့ neuroeducation အပေါ်5စာအုပ်တွေ
Maite Nicuesa | 31/05/2021 22:54 | အကြံပေးချက်များ
နွေရာသီသည်စာဖတ်သူများစွာ၏အပျော်အပါးနှင့်ပေါင်းသင်းသောနှစ်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည် စာဖတ်ခြင်း. Neuroeducation သည်အကြောင်းအရာများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဤနယ်ပယ်မှအထူးစာအုပ်များကိုသင်ရှာနိုင်သည်။ လေ့ကျင့်ရေးနှင့်လေ့လာရေးတွင်သင်၏နွေရာသီစာဖတ်ခြင်း၌သင့်အားလှုံ့ဆော်ရန်ခေါင်းစဉ်များစွာကိုကျွန်ုပ်တို့မျှဝေသည်။ နွေရာသီတွင်ဖတ်ရန် neuroeducation နှင့်ပတ်သက်သောစာအုပ်ငါးခု!
1 Neuroeducation: သင်နှစ်သက်သောအရာကိုသာသင်ယူနိုင်သည်
2 Neuroeducation ၏ Agora ။ ရှင်းပြပြီးအသုံးချ
5 ကလေး၏ ဦး နှောက်ကမိဘများကိုရှင်းပြသည်
သင်ယူမှုဖြစ်စဉ်ကိုသြဇာသက်ရောက်စေသောအကြောင်းအချက်များကဘာလဲ။ Francisco Mora ရေးသားခဲ့သောဤစာအုပ်သည်ဤမေးခွန်း၏အဖြေကိုပေးထားသည်။ ဤစာအုပ်သည်အခန်း ၂၂ ခန်းပါ ၀ င်ပြီးစာဖတ်သူသည်အဓိကကျသောအယူအဆများမှတစ်ဆင့်သင်ယူခြင်းမှော်အတတ်သို့စိမ့်ဝင်သွားစေနိုင်သည့်အခန်းကြီး ၂၂ ခုပါဝင်သည်။ စိတ်ခံစားမှု, စာနာမှု, သိချင်စိတ်, အာရုံစူးစိုက်မှု, မှတ်ဉာဏ်, ဆန်းသစ်တီထွင်မှု...
အထင်ရှားဆုံးသောလေ့လာမှုများသည်စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏တန်ဖိုးနှင့်လိုက်ပါသွားသည်။ ကျောင်းသားတစ် ဦး သည်သူနှစ်သက်သောဘာသာရပ်တစ်ခုထဲသို့ ၀ င်သောအခါသူ၏အာရုံစူးစိုက်မှုအဆင့်သည်တိုးတက်လာပြီးအချိန်နှင့်အမျှသူ၏အမြင်ပြောင်းလဲသွားသည်။ အရာအားလုံးသည်ဤအခြေအနေတွင်ပိုမိုလွယ်ကူစွာစီးဆင်းပုံရသည်။ သူသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးအကြောင်းအရာများကိုလေ့လာခြင်းအားလေ့လာခြင်း၌အခြေအနေပြောင်းလဲသွားသည်။
Neuroeducation ၏ Agora ။ ရှင်းပြပြီးအသုံးချ
ဤသည်ကို Iolanda Nieves de la Vega Louzado နှင့် Laia Lluch Molins တို့ ပူးပေါင်း၍ ရေးသားထားသောအလုပ်ဖြစ်သည်။ ဤစီမံကိန်းသည်ဆွေးနွေးငြင်းခုံခြင်းနှင့်ပူးပေါင်းခြင်းမှဤပြonနာကိုပြန်လည်စဉ်းစားရန်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဤလေ့လာမှု၏အရာဝတ္ထုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုအာရုံစိုက်စေသောအစည်းအဝေးကျင်းပရာနေရာ - ထူးချွန်မှုရှာဖွေခြင်းမှတဆင့်ပညာရေးနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အတွက်စွမ်းရည်.
၎င်းသည်သင်တန်းနယ်ပယ်တွင်အလုပ်လုပ်နေသောဆရာများ၊ မိသားစုများနှင့်ပညာရှင်များအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်စာအုပ်ဖြစ်သည်။ ဤစာအုပ်သည်ဤပြissueနာကိုဤနယ်ပယ်တွင်အခြေခံစံနှုန်းရှိသောကျွမ်းကျင်သူများမှတစ်ဆင့်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
ဤလုပ်ငန်းသည်ကျောင်းသားများအားလေ့လာခြင်း၏စွန့်စားမှု၌ပါ ၀ င်သောပညာရှင်များကိုရည်ရွယ်သည် ပညာရှင်အားလုံးက ဦး နှောက်အကြောင်းအမြဲသိချင်ကြတယ်။ ဤလုပ်ငန်းသည်အများပြည်သူအတွက်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနားလည်သောဘာသာစကားဖြင့် neuroeducucation သို့ကူးပြောင်းသည်။
ဒီစာအုပ်ကိုရေးသားသူ David Bueno i Torrens ကဘာစီလိုနာတက္ကသိုလ်မှမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာသုတေသနနှင့်ပါမောက္ခဖြစ်သည်။ သူသည် Oxford တက္ကသိုလ်မှသုတေသီတစ် ဦး အဖြစ်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံသည်သင်ယူခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခြင်းလောကတွင်အရေးကြီးသောပံ့ပိုးမှုများပြုလုပ်သည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဤအလုပ်သည်ကျောင်းသားများကိုလှုံ့ဆော်ခြင်း၊ ပညာပေးခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသောဆရာများအတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်။
အလုပ်၏စာတန်းထိုးမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - ဦး နှောက်မည်သို့လေ့လာသည်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းဖြင့်သင်၏စွမ်းရည်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ။ ဤသည်မှာ Hector Ruiz Martínရေးသားသောစာအုပ်ဖြစ်သည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်၊ ဇီဝဗေဒပညာရှင်နှင့်သုတေသနပညာရှင်ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသိပ္ပံသင်ကြားရေးဖောင်ဒေးရှင်း၏ဒါရိုက်တာဖြစ်သည်။
စာအုပ်၏စာဖတ်သူသည်စာအုပ်၏စာရေးသူနှင့်အမြဲတမ်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုထူထောင်နိုင်သည်။ ဥပမာ၊ အချို့သူများသည်အခြားသူများထက်စာလျှင်အချိန်ကိုအဘယ်ကြောင့်ပိုမိုလွယ်ကူစေကြောင်းရှာဖွေပါ။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှမှတ်ဉာဏ်တွင်စွဲမြဲနေသောရေရှည်အသိပညာ၏သော့ချက်ကားအဘယ်နည်း။
ကလေး၏ ဦး နှောက်ကမိဘများကိုရှင်းပြသည်
ဤသည်မှာနွေရာသီအားလပ်ရက်များအတွင်းဤခေါင်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်သောစာအုပ်များဖတ်ရန်နေရာရှာလိုသောမိဘများအတွက်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ရှိသော vlvaro Bilbao ၏အလုပ်ဖြစ်သည်။ ကလေးဘဝသည်သက်တမ်းအရင့်ဆုံးသင်ယူမှုအချို့ဖြစ်သည့်ဘဝကာလဖြစ်သည်။ ကလေး၏ ဦး နှောက်သည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။ ဤစာအုပ်သည်ဤမေးခွန်း၏အဖြေကိုပေးထားသည်။
အခြားလေ့ကျင့်ရေးနှင့်လေ့လာရေးစာဖတ်သူများအားအခြားမည်သည့်ခေါင်းစဉ်များကိုသင်အကြံပြုချင်ပါသလဲ။ နွေရာသီမှာဖတ်ဖို့ neuroeducation အကြောင်းစာအုပ်ငါးခုကသင့်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လေ့လာမှုများ » NOTICIAS » အကြံပေးချက်များ » နွေရာသီမှာဖတ်ရှုဖို့ neuroeducation အပေါ်5စာအုပ်တွေ